DAAWO VIDEO: Wasiirka Amniga ‘‘Xiisadda ka jirta Muqdisho waxay gabaad u noqon kartaa Al-Shabaab & Daacish‘‘ | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO VIDEO: Wasiirka Amniga ‘‘Xiisadda ka jirta Muqdisho waxay gabaad u noqon...
DAAWO VIDEO: Wasiirka Amniga ‘‘Xiisadda ka jirta Muqdisho waxay gabaad u noqon kartaa Al-Shabaab & Daacish‘‘
Muqdisho (Halqaran.com) – Wasiirka Amniga Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta Shir jaraaid ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaalada ku soo korortay Magaalada Muqdisho.
Wasiir Xundubey ayaa sheegay in wax laga xumaado tahay in shacabka Magaalada Muqdisho dhibaato loo horseedo.
Sidoo kale, wuxuu sheegay in ay cabsi ka qabaan meel walbo oo uu ka socdo abaabul aan sharci ahyn in ay ku soo dhuuntaan kooxaha Argagaxisada ah oo laga yaabo in ay ka faa‘ideystaan fursadna ka dhigtaan isla markaan meelahaas gabaad ka dhigtaan.
“Waxaa soo badanaya falal loo baahan yahay in laga hortago, yaanan gabaad loo noqon falalkaasi, dad aan sharci aqoon oo la maamuli karin in gabbaad loo noqdo waa in aad la isaga ilaaliyo,” ayuu ku yiri Shirka jaraa’id Wasiir Xundubey.
Wasiirka Amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay in Dowlad ay awood leedahay sugida amniga, isla markaan uu ku filanyahay ciidanka ay heysato, balse ay u turaayeen shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay diidanaayeen in ay ku kor dagaalamaan dadka Shacabka ah.
Ugu dambeyn, wuxuu shacabka Muqdisho ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan amniga, isla markaana aysan oggolaan nabadii ay dhibka badan lagu dhaliyey in ay si fudud ku lunto.
Wasiirka Amniga Xundubey